[Topnews] Abukar Cawale oo Abdinasir Sola sharafta ka qaaday "Farmaajo kadib Ogaadeen buu sheegtay markii horena Raxanweyn laakiin waa Madhibaan dhalada"
Saturday January 06, 2018 - 06:14:02 in Wararka by Super Admin
#BEENI_RAAD_MALEH . Odayga layiraahdo #Abdinasir_Solo wuxuu sheegay inuu baaritaan dheer kadib soo xaqiijiyey inaan beenka sheegay oo aanan weligey dhigan jaamacada #London_Metropolitan_University Waatan shahaadadii aan ka qatay Koorsada la yiraa
#BEENI_RAAD_MALEH . Odayga layiraahdo #Abdinasir_Solo wuxuu sheegay inuu baaritaan dheer kadib soo xaqiijiyey inaan beenka sheegay oo aanan weligey dhigan jaamacada #London_Metropolitan_University Waatan shahaadadii aan ka qatay Koorsada la yiraahdo Community leadership & development weliba waxaan koorsadaan wada dhiganay oo aan isku koorso qaadanay
1...Wasiirkii hore ee Caafimaadka dowlada federaalka Marwo #Xaawo_Xasan .
Aqoon yahay Soomaaliyeed #Maxamed_Xaaji _Ingiriis
Aqoon yahan Soomaaliyeed Sakariye Maxamed Isticmaar
Aqoon yahan Soomaaliyeed Bashir Mursal Issa Botan
Abdinaasiroow waxaad sheegataa inaad soo baratay #Investigation_Journalism ... #CARnatus hal shahaado oo aad ku qaadatay arintaas Xataa 3 day's training ?
Waxaad kaloo sheegataa oo #Facebook kuugu inaad haysatid Master Degree on Computer science #Car na tus shahaado ama REF cadaynaya Jaamacada aad kasoo baxday ?
Abdinasir Solo wuxuu sheegay in joojinta qaadka aanan shaqo ku lahayn arinaas #ALAAHbaan kabaryey inuu ajar iga siiyo inaan ku faano marabo doorkii aan hulahaa halgankaasna haduu #Abdinasir_Solo libinta ii quuri waayey SOOMAALI oo dhan baa ii quurtey iina og halgankaan soo galay.
#Abdinasir wuxuu soo qoray inaan ahaa nin walan oo oo #Finland kayiid oo gabar cadaan ah qabi Jirey
Abdinaasir waxàn leeyahay #YES waa run waxaan ahaa wiil dhalinyaraa waxaan jeclaaday gabar qurux badan oo aan isku Xafiis kashaqen jirney oo Finlandeys ah waana guursaday oo wiilbeyna ii dhashay #Meherkeygii waxaa joogay oo markhaati iiga ah .
Abdi Weli Isse #Markhaati
Abdiwali Mohamed Hassan Kaahin #Markhaati
Abdiqadir Olad #Markhaati
Mahad Ali Mire #Matkhaati
Hashi Abdulkadir #Matkhaati
Abdinasir Solo waxaan leeyahay walaale hadaad igu caayesid 20 sano kahor gabar aan kala tagnay Adigaa hada waxaad la nooshahay oo caruur kuu dhashay HABAR Poland katimid oo weliba aan wax diin ah haysan ee aaminsan #Big_Ban_Theory oo aadan Jacayl kuraacine aad xoogaa lacaga ku raacday .
Bal noo sheeg diinta aad naagtaan ku qabtid iyo markakhaatiyadii joogey Meherkaaga ma aqaan inuu meher qabto naag aan EHLU KITAAB ahayne .
Waxaan kaloon kuleeyahay walaaloow inta aadan ninkale Afka ku taagin badbaadi caruurtaada.oo adigu isa soo sax.#ALAHA kuusoo hanuuniyo adiga ,Habartaada iyo reer #Poland oo dhan ..
Abdinaasir walaale waxaad kaloo soo qortay inaan #Qaadka cuni jirey oo aan ahaa nin Tax drivers ah oo weliba hada kahor anoo si suuq madoow ah ku shaqaynaya Policeku igu qabteen ...Walaale waa run Buugeyga #Wiilkii_Quusan_Waayev ayeey ku qoran tahay sheekadaas iyo JAB iyo HOOG badan oo aan soo maray waagaan Qaadka cuni jirey.
Waana waxa igu kalifay inaan Qaadka la dagaalamo si looga badbaadiyo dhalunyarada Soomaaliyeed waddadii qodxaha lahayd ee soo maray.
More info www.Qaddiid.so
Walaale Cadinaasir waxaad kalood sheegtay inaan labo magac leeyahay oo aan isju dhiibay magac kale OK.
Walaalow magaca adigaa ixasuusiyaye bal CAR noo sheeg ABTIRSIYAHAAGA oo buuxa #Qabiilkaaga laftaada iyo #AABAHAA cid taqaana .
Ugu danbeyn Walaale Shalay waxaa lagaa saaray bahda Sports ka London kadib markii aad been Abuur iyo Aflagaado ugeysatay Yusuf Islam Mryuu CheYuu Walaale doraad waxaa lagaa saaray oo wiliba si fool xun aad ula dagaashay Walaalaha WALAAL AFURI kadib markii hunguri kaa galay.lacag loo aruuriyey masaakiin waxaad arintaas Aflagaado iyo cay kula kacday #Bashir_Musrsal ceebtii kaaraacdayna reer London waa ogaayeen.
Walaale Abdinasiroow waxaad caayday bahda #Universal_TV markii shaqada lagaa ceyriyey anshax xumo aad ugeeysatay gabar Soomaaliyeed awgeed.
Walaale #ALAHA kusoo hanuuniyee intaas haday cashar kuu noqon weyday maanta ayaa laguu yaabaa walaale maantaad #CIIN daaqday ee waxaad kahesho waxba ha iga siin.
Waxaan sugnaaba waa #SHAHAADOOYINKII
iyo Sababta marka ay ENGLAND iyo POLAND ciyaarayaan kubada cagta WHY you always support Poland ? walaale malagu qasbaa .